Fiterahana ao amin'ilay zaza - antony
Ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia manana ny antony manokana, ary izany koa no miteraka, izay tsy mitranga tahaka izao. Tsy mora anefa ny manatona ny fahamarinana amin'ny voalohany. Dokotera maro no mihevitra ny tranga tsy manara-penitra, ary mandalo tsy misy andalan-tsoratra, tsy misy fivoarana ho aretina.
Misy antony maromaro ahafahana miala amin'ny zaza, ary hanandrana handinika azy ireo isika rehetra, na dia ny olona tsirairay aza dia samy manana ny maha izy azy ary tsy misy fifampidinihana feno amin'ny dokotera, dia mbola tsy vita izany. Raha ny zava-drehetra dia manala haingana ny vatana io toe-javatra io ary mandritra ny fotoana fohy dia manjary tebiteby, izay midika fa ny fitsaboana dia tokony aseho faran'izay haingana.
Ny antony mahatonga ny boka sy tazo amin'ny zaza
Rehefa marary ilay aretina amin'ny viriosy na ny gripa, dia mety hipoitra tampoka ny mari-pànan'ny vatany, ary mihetsi-po ny vatana alohan'ny fotoana hanangonana azy. Mitranga izany raha mandeha minitra vitsy monja, ny elanelam-bary dia miala ambany hatramin'ny 39 ° C sy etsy ambony. Amin'io tranga io dia mila mitandrina tsara ny ray aman-dreny, satria mety ho voan'ny tsindry mafy ny zaza.
Mety hitranga ny vokatra eo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro noho ny fihinana poizina amin'ny sakafo mahavelona na ny fanafody sy ny zavatra simika ao an-trano. Avy eo dia miteraka fahasahiranana ireo soritr'aretina anankiroa ireo ary mitaky fitsaboana any amin'ny hopitaly. Raha misy fotoana ny fiterahana, dia azo atao ny fitsaboana any an-trano.
Ny ankizy dia azo alaina amin'ny hafanana amin'ny masoandro - izay antsoina hoe hafanana sy masoandro. Amin'ny toe-javatra sasany, ny toe-javatra toy izany dia miaraka amin'ny fitomboan'ny hafanam-potoana hatramin'ny 40 ° C, na ny mifamadika amin'izany, ny fanesorana azy.
Ny hafanana ambony sy ny boka dia mety amin'ny zazakely iray izay nahatonga ny aretin'ny rotavirus. Amin'io tranga io, ny aretim-pivalanana dia matetika mifandray amin'ny aretina iombonana ary mila fitondrana mahomby ny ankizy. Mba hisorohana ny tsy fahampian-drano.
Ny antony mahatonga ny fery amin'ny zaza tsy misy tazo
Ny aretina sasany amin'ny taova anatiny dia mety handreraka an'ilay zaza tsy misy antony mazava. Io no jiro sy aretina hafa ankoatra ny aretina, ny pyelonephritis (fampihorohoroana), ny tsy fahombiazan'ny fony amin'ny ankizy ihany koa, matetika dia miteraka ranomafana.
Matetika koa ny fery amin'ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny zaza ankehitriny, na firy taona. Matetika izy io dia mampitahotra, matahotra ny zavatra. Tsy mitaky fitsaboana ity toe-javatra ity raha toa ka doka tokana izy io.
Acetonomic syndrome, Raha misy ankizy manana fofona acetone avy ao am-bavany, matetika dia miaraka amin'ny tsy fahampian-tsakafo. Azonao atao ny manakana azy io, amin'ny voalohany, ka manome vahaolana amin'ny glucose.
Zava-mitranga am-bava amin'ny ankizy
Matetika ny boka dia gaga, nanomboka tamin'ny alina rehefa natory ilay zazakely. Ny antony dia matetika ny aretina ao amin'ny taratasy matekine intestinal - dyskinesia, gastritis, fery. Tokony handinika amim-pitandremana sy hanontany ny ankizy ianao, mba tsy hohadinoina ilay antsoina hoe "kibon'ny akoho" (appendicitis).
Ny antony mahatonga ny rotsakorana amin'ny maraina dia mety ho kankana na ascid, ary raha averimberina imbetsaka izany, dia tsy maintsy mandalo fitsapana ho an'ny helminths ny zazakely.
Ny maso mitranga ho an'ny ankizy
Tavy goose tsy hiteraka hiteraka
Antibiotika ho an'ny bwonikozon'ny ankizy - anarana
Mipnaly amin'ny ankizilahy
Firy andro ny ankizy mijaly amin'ny poti-tsigara?
Dermatitis amin'ny ankizy - fitsaboana
Nampitomboina volombolon'ny zaza
George Clooney dia nanome ny loka loka Aurora ho an'ny mpandresy
Tabilao ho an'ny lakozia
Lalao psychic ho an'ny tanora
Ny zaridaina mena midorehitra - iza no mety ary inona no tokony harahina amin'ny vanim-potoana vaovao?
Ny anaran'ny ankizilahy Alabayev
Tratra an-tsokosoko teny an-dalantsara miaraka amin'ny fitaratra
Katya Osadchaya - biography
Ny fitsaboana ny adenoidan'ny ankizy tsy misy fandidiana
Nesorin'i Megan Fox ny fisarahana tamin'ny Brian Austin Greene
Nahoana no manonofy ny lohanao?
Ireo singa manan-danja eo amin'ny fananganana toetra
Efitranon'ny ankizy ho an'ny zazalahy - fanaka